Inona no tambajotra tsy misy atokisana, tsy mila fitokisana - Cazoo
Home » Home » Inona no tambajotra tsy misy atokisana, tsy mila fitokisana
tenifototra: andian-tsoratra Chain, rafitra afovoany, rafitra itsinjaram-pahefana, trustless
Rafitra iray trustless midika izany fa ny mpandray anjara voarohirohy dia tsy mila mifankahalala na mifampatoky na antoko fahatelo hiasa ny rafitra. Amin'ny tontolo tsy mila fitokisana tsy misy orinasa tokana manana fahefana amin'ny rafitra, ary marihina ny marimaritra iraisana raha tsy mifankafantatra na mifampatoky ny mpandray anjara raha tsy an'ny rafitra mihitsy.
Ny fananana voajanaharin'ny tsy fahatokisana amin'ny tambajotram-pifandraisana (P2P) dia natolotry Bitcoin, satria namela ny angon-drakitra transactional rehetra ho voamarina sy voatahiry tsy miovaova amin'ny blockchain ampahibemaso.
Ny fahatokisana dia misy amin'ny ankamaroan'ny fifanakalozana ary ampahany lehibe amin'ny toekarena. Na izany aza, ny rafitra tsy mila fitokisana dia mety hamaritra ny fifandraisan'ny toekarena amin'ny alàlan'ny famelana ny olona hatoky ireo fotokevitra abstract fa tsy andrim-panjakana na antoko fahatelo.
Zava-dehibe ny fiheverana fa ny rafitra "tsy matoky" dia tsy mamafa tanteraka ny fifampatokisana, fa kosa zarain'izy ireo izany amin'ny karazana toekarena izay mandrisika ny fitondran-tena sasany. Amin'ireny tranga ireny dia marina kokoa ny milaza fa mihena ny fahatokisana fa tsy foanana.
I rafitra afovoany Tsy izaho trustless amin'ny maha mpandray anjara azy ireo dia manankina fahefana amin'ny toerana lehibe ao amin'ny rafitra ary manome alalana azy ireo handray fanapahan-kevitra. Ao amin'ny rafitra afovoany, raha mbola matoky ny antoko fahatelo atokisana ianao, dia hiasa araka ny niniana ny rafitra. Tandremo anefa ny olana, na dia ny olana lehibe aza, izay mety hipoitra raha toa ka tsy azo atokisana ilay orinasa atokisana .. Ny rafitra afovoany dia mora iharan'ny tsy fahombiazan'ny rafitra, fanafihana na fanapahana. Ny angon-drakitra dia azo ovaina na alain-tahaka ihany koa avy amin'ny fahefana foibe tsy misy alalana imasom-bahoaka.
Matoky rafitra iray afovoany toa an'i Binance aho, izay inoako fa matotra sy azo antoka. Azonao atao ny mamaky ny torolàlana eto hahafantaranao ny atao hoe Binance sy ny fomba fampiasana azy. Te hividy cryptocurrency amin'ny Binance ve ianao? Ataovy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra etsy ambany: hahazo ny 20% fihenam-bidy amin'ny kaomisiona, mandrakizay! Fa nahoana no tsy?
Mividiana CRYPTOCURRENCIES ON BINANCE
Andao haka filôzôfia kely, fa miaraha mifikitra amiko: raha resaka vola, ny rafi-pitantanana afovoany dia mety manana antso ambony kokoa noho ny rafitra itsinjaram-pahefana (izay trustless), satria ny olona mirona amin'ny fifaliana kokoa mitarika fitokisana amin'ireo fikambanana fa tsy rafitra. Na izany aza, na ny fikambanana dia misy olona mora mandray tsolotra, ny rafitra tsy mila fitokisana dia azo fehezin'ny kaody komputer.
Bitcoin sy blockchains hafa Porofon'ny asa dia mahazo ny azy ireo trustless manome fandrisihana ara-toekarena ho an'ny fitondrantena marina. Misy ny fanentanana ara-bola hitazomana ny fiarovana ny tambajotra, ary ny fifampitokisana dia zaraina amin'ireo mpandray anjara marobe. Izany dia mahatonga ny sakana tsy mahatohitra ny marefo sy ny fanafihana, na dia manala ireo teboka tsy fahombiazana tokana aza.
Lahatsoratra talohaNy tantaran'ny Blockchain
Lahatsoratra manarakaTsy misy
Inona ny Ethereum?
Inona no atao hoe Swan Mainty? Manazava ny hetsika Black Swan izahay.
Inona no atao hoe Volatility?